Dhammaan lix qof oo saarnaa oo ku dhintay diyaarad qalab caafimaad siday oo ku burburday gobolka Bay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDhammaan lix qof oo saarnaa oo ku dhintay diyaarad qalab caafimaad siday oo ku burburday gobolka Bay
May 4, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Burburka diyaarada. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diyaarad siday qalab caafimaad ayaa ku burburtay degmada Bardaale ee gobolka Bay galabta oo Isniin ah, waxaana ku dhintay dhammaan lixdii qof oo saarnaa.
Diyaarada ayaa ka kacday garoonka diyaaradaha Muqdisho halkaas oo ay ka qaaday qalab loogu talogalay la tacaalida xanuunka COVID-19, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda.
Labbo kamid ah lixda qof ee saarnaa diyaarada ayaa ahaa Soomaali.
Ma cada weli sababta keentay burburka diyaarada, oo ay lahayd African Express, oo ah shirkad duulimaad oo fadhigeedu yahay dalka Kenya.
May 5, 2020 Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay baarayso sababta ka dambaysa burburka diyaarada African Express
May 9, 2020 Ciidamada Itoobiya oo qirtay in ay soo rideen diyaarad laga lahaa Kenya
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Inkastoo aan wax dagaal fool ka fool ah uusan ka dhicin beryihii u dambeeyay magaalada Gaalkacyo haddana ciidamada Puntland iyo Galmudug ayaa isku hor fadhiya duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland iyo Jubbaland ayaa ku baaqay in shir deg deg ah oo u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah ay isugu yimaadaan Muqdisho 30-ka Janaayo si loo dhammeeyo khilaafka ka [...]